Oromo Free Speech: Labsa Tokkoomuu ABO fi KY-ABO
Yeroo ammaa haalli hamaan ummanni keenya biyya isaa Oromiyaa keessatti mudachaa jiru himamee kan hin dhumne tahuus haala sukaneessa akka tahe beekamaa dha. Ummanni Oromoo biyya isaa keessatti mirga abbaa biyyummaa dhaabee, lafaa fi qabeenyi isaa akka malee saamamee, badii takkan maletti hidhamaa fi ajjeefamaa jira. Ajjeechaan jumulaa ummata Oromoo irratti mootummaa TPLF (EPDRF)n tooftaa dhoksaan raawatamaa jira.
Barattoonni Oromoo waan gaaffii mirgaa gaafataniif, mana barnoota sadarkaa adda addaatti fi universitooata keeysatti rasaasan ajeefamaa fi hidhamanii gochaan garajabinaa ilma namaarratti hin raawwatamne irratti hojjatamaa jira.
Waan taheef, marii Araaraa fi Tokkummaa ABO fi Koree Yeroo ABO (KY-ABO) gidduutti waggaa lamaa oliif deemaa turte xumura itti godhuun tokkummaadhaan akka dhaaba tokkootti sochoo’uf murtii irra geenyee jirra. Dhaaba keenya ABO jalatti miseensota, hoogganoota, fi qabeenya keenya akkasuma beekkomsaa fi dandeettii teenya walitti dabaluudhaan caasaa tokkicha jalatti Qabsoo Bilisummaa Oromoo tan ABOn gegeeffamtu akka qaama tokkootti finiinusuuf tokkoomne jirra. Jaarmayootiin tokkooman kun sagantaa, heeraa fi seera ABOtti buluu fi hujiirra oolchuuf akka jabeenyaan hojatan mirkaneessanii jiru.
Mariin tokkoomuuf godhamaa ture kun yeroo hamma tokko fixullee ABO fi KY–ABO bara haaraya Amajjii 1, 2015, waliigaltee jaarmayoota kanaa haala abdii fi hamilee qabuun mallatteessudhan xumuramuu isaa miseensota, deeggartootaa fi ummata Oromoo yeroo beeksisan gammachuu guddaadhani.
Posted by Oromo firee speech at 9:21 AM